ढिला नगरौं, सबै शक्ति कोरोनाविरुद्ध लगाऔं::Nepali News Portal from Nepal
ढिला नगरौं, सबै शक्ति कोरोनाविरुद्ध लगाऔं
आखिर जे नहोस् भन्ने कामना गरिएको थियो, त्यही भयो । नेपालमा पनि कोरोनाले मान्छे चुँड्न थाल्यो । संक्रमणलाई ठमठम् हिँडेर घर गएकाहरुले नेपालीमा आत्मवल बढाएका थिए । अझ, औषधिबिनै कोरोलाई जित्दा नेपालीको खानपान र आनीबानीको पनि चर्चा गरियो । नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ भन्ने आत्मविश्वास जगाइयो । तर, समय उस्तै रहेन । महाविपत्तिले अब शोक निम्त्याएको छ । संक्रमितको संख्या बढ्दैजाँदा कतै अझ ठूलो अनिष्ट हुने त हैन भन्ने तर्कनालाई बल पुगेको छ । यसले गर्दा अब होसियार हुनु, जोगिनु नागरिकको कर्तव्य बनेको छ । यता, राज्यको तर्फबाट संक्रमितको उपचारमा खटिनु्, परीक्षणको दायरा बढाउनु तथा संक्रमण नियन्त्रणको लागि अब सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।
कोभिड–१९ ले विश्व त्रसित बनाउँदा र संक्रमण भित्रिदाँसम्म पनि नेपालको खासै तयारी थिएन । तयारी गर्नेबेलामा जिम्मेवार मन्त्रीहरु ‘कोरोना फ्रि देश’ र ‘नेपालीलाई कोरोना नलाग्ने’ अभिव्यक्ति दिँदै थिए । धेरैपछि मात्र नेपालले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा तदारुकता देखायो । तदारुकतासँगै कमसल स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड सतहमा आयो । स्थिति जटिल बन्यो । डाक्टरले व्यक्तिगत सुरक्षा कवच पाएनन् । मास्कको अभाव देखियो । शौभाग्य, त्यो अवधिका संक्रमितको संख्या बढेन । संक्रमितको संख्या नबढेकै अवस्थामा विज्ञहरुले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिइरहे । आरडीटी हैन पिसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाए । तर, परीक्षणले गति लिन सकेन । सीमा नाकामा नेपाल भित्रन चाहनेहरु रोकिए । रोकिएका नागरिकहरु लुकेरै देश छिरे । उनीहरुको टे«सिङ हुन सकेन । नेपाल भित्रने उपक्रम रोकिएको छैन । अहिले पनि सीमामा हजारौँ नागरिक अलपत्र छन् । युएईलगायतका देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई देश ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यहाँका सरकारले नै आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजा भनिसकेपछि राज्य चुप लाग्न मिल्दैन । तर, उनीहरुलाई नेपालप भित्र्याउँदा संक्रमण पनि भित्रिने तथ्यलाई राज्यले भुल्न मिल्दैन । नेपाल भित्र्याउँदा नै परीक्षण गर्ने, क्वारेण्टाइनमा राख्ने र स्वस्थ भएको प्रमाणित भएपछि मात्रै समुदायमा मिसिन दिन्ुपर्छ । सुन्दा सजिलो लागे पनि यो काम सजिलो छैन । सामान्य त्रुटिकै कारण संक्रमण बढेकोमा पनि शंका छैन । लकडाउनलाई ‘अमोघ अश्त्र’ मानेर तन्काउनेबाहेकका सबै काम सुस्त थिए । लकडाउन खुकुलो बनाउने घोषणा गरेकै बेला संक्रमण एकाएक फैलियो । संक्रमणले मान्छे नै चँुड्न थाल्यो । स्थिति विकराल बन्ने संकेत देखिएको छ । संक्रमण बढ्दो छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले बढ्दो संक्रमितलाई उपचार दिन असम्भव हुने, अस्पतालहरु भरिने र आइसीयू बेडको अभाव हुने सम्भावना बढेर गएको छ । कामना गरौँ, त्यस्तो अवस्था नआओस् ।
संकटको यो घडीमा सरकारले आफ्नो गति बढाउनु पर्ने देखिएको छ । पहिचान भएका संक्रमितको उपचार हुँदै गर्दा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ । संक्रमण देखिएका क्षेत्रलाई बन्द गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तै मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो केही हुँदैन । यसर्थ,मान्छेको जीवन रक्षार्थ जे गर्न सकिन्छ, ती सबै उपायहरु अपनाउनुपर्छ । समय घर्किसकेको छ । अबको ढिला क्षम्य हुँदैन । सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाविरुद्ध लगाऔँ ।
धौलागिरी अस्पताल प्रकरण : सिपाहीको मनोबल नगिरोस, राज्यकोषको दोहननहोस्
बजेट : यथार्थवादी तर कार्यान्वयमा चुनौति
बढ्दो संक्रमणमा उस्तै दायित्व !
रुकुम घटना: मानवीयताविरुद्धको अपराध
बढेको संख्याको व्यवथापन गरौं
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निलम्बन गर
थप १३ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या १८ सय नाघ्यो
पोखरा, १९ जेठ – दुई बालबालिकासहित १३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका...
कोरोना नेगेटिभ आएर घर फर्किँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु
स्याङ्जा, १९ जेठ– स्याङ्जामा क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किँदै गर्दा एक व्यक्तिको बाटोमै...
गलकोटका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श
बागलुङ, १९ जेठ– क्वारेन्टाएनमा बस्दा मनोसामाजिक असर पर्न सक्ने भन्दै जिल्लाको...
असारभित्रै करिडोर स्तरोन्नतीको काम सकिने
बागलुङ, १९ जेठ– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरको बागलुङ–गुल्मी खण्ड स्तरोन्नतीको...
कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनको पूर्व अभ्यास
म्याग्दी, १९ जेठ– नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी पुर्व...
म्याग्दीका थप दुई जनामा डेंगु : संख्या १२ पुग्यो
म्याग्दी, १९ जेठ– म्याग्दीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणसंगै डेंगु र स्क्रव टाइफसका...
तीव्र गतिमा फैलिँदै कोरोना, सोमबारै थपिए २२६ संक्रमित
काठमाण्डौ, १९ जेठ– पछिल्लो केही दिन यता सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरुले नेपालमा...
भाग्दा भाग्दै कोरोनाले समायो
बागलुङ, १९ जेठ– तमानखोला गाउँपालिकाको संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गराएको पाँच बर्षे...
एमसिसीको कार्यक्रम तीन वर्षदेखि नै बजेटमा छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं, १९ जेठ– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज...
लोमसको गुन्द्री !
साधु सन्यासीहरु सामान्य हुन्छन् । विचारमा उन्नत हुन्छन् । मानवता नै...